Version 0.9.7.0 – Rajeenayo iyo qoreysa ku wareegsanaa oo dhan, iyo SuperProxy Alfa
June 6, 2015 by dalabyo 2 Comments
New version halkan waa!
Fadlan kor! Fadlan, Fadlan kor! Fadlan la qaar ka mid ah sonkor on top.
Waa maxay sababta aad kor?
Version Tani wuxuu diyaariyaa taageerada wakiil Google, taas oo macnaheedu yahay in Google Translation otomaatig ah mar kale ka shaqeyn doonaan.
Version Tani waxay cusboonaysiisay qaab database, taas oo macnaheedu yahay WordPress 4.2 waxaa lagu taageeray, oo waxaa laga filayaa inaad badbaadin ~ 40% oo ka mid ah size miiska hadda
Waxaan ugu danbayntii waa in version hore ee editor turjumaad backend ah, waxa aad ku tusi doonaa xadhig dadka dhabta ah ayaa la turjumay oo kuu oggolaado in aad si deg deg ah u eegaan oo ay tirtirto kuwa.
Sida aad kor waa in?
Iyadoo nasiib qaar ka mid ah, waxaad fursad u haysataa in si fudud kor ku qoran dashboard WordPress. Waxaa lagu talinayaa in aad raad raac, iyadoo ay jirto hab aan lahayn ka dib markii hagaajinta database ayaa dhameystirtay.
Quirks kasta, arrimaha, dhibaato – ka nala soo xiriir u sameeyaan waa saaxiibkaa.
Waa maxay waxaas SuperProxy iyo sababta aad awood u waa in this?
SuperProxy waa cusub “Hel hodan degdeg ah” nidaamka. Heedhe…
Dhab ahaantii, waxaan isticmaaleynaa qanjidhada dhamaadka ay u oggolaadaan shirkado iyo shaqsiyaad in ay helaan qaybiyey inay webka. Waxaan la bixin doonaa gaadiidka this, sidaa darteed haddii aad soo iibsatay adeeg marti iyo aad qabto tan oo xogta lagu wareejiyo aadan la isticmaalayo, waxaan dhab ahaantii ka mahadinayaan doonaa in aad awood u habkaani, waxaa noo taageeri doonaa oo noqon doona in aad is. Waxa aanu daabici doonaa faahfaahin dheeraad ah oo arrintan ku saabsan sida ay u noqdaan kuwo la heli karo.
Markaasuu – si inta kale ee changelog ah:
Rajeenayo in is-dhexgalka Woo
God Deji base64 iyo in la yareeyo size of pages translatable
Rajeenayo Widget ka dhigaysa calanka si sax ah u muujiyaan marka sanduuqa xigtaa ay qaldan loo isticmaalay
Saaridda bar horumarka dhamaadka hore, waxaa la aysan arkin ama loo isticmaalo, iyo dhib badan u qalantay
3 luqado cusub oo ay taageerayaan Bing
shortcode dambaysay ololaha si
fogaado tarjumaadda qoraalka aan / content json wuxuu diyaariyaa arimo la qaar ka mid ah plugins download Addoon
Taageer sifo Sh ugu, mahad Mark Serellis
Qaar ka mid ah taageerada ay u plugin buugga ganacsiga
Sidaas – Enjoy version this, hana shisheeyena yaanu noqon, noo sheeg sida ay u shaqayso idiin.
Filed Under: Shaaciyaan Release, Software Updates Tagged Iyadoo: google turjumi, yaryar, sii daayo
Version 0.8.0 – Attack of xidhmay warbaahinta ee
November 29, 2011 by dalabyo 65 Comments
Marka xidhmay warbaahinta la dagaalamaan
Waa hagaag ka hor maalinta kama dambeysta ah u rarnaa Google Translate API inay joojiyaan shaqada, waxaan ugu dambeyntii waxay awoodeen inay isku duba-ridida this cusub release. Mid ka mid Tani soo raacay muddo dheer dhibaato oo soo bandhigay by version wayn, sababtuna badanaa xaqiiqada ah in Google go'aansaday in uu bandhig ay xadidan tahay isticmaalka ka hor maalinta kama dambeysta ay taasina waxa ay keentay nuquladii hore taageeri codsiyada in lagu xoojiyo marxalad cusub. Isbedelka Google ayaa sidoo kale waxaa dhaliyey xadka API ah ee Bing turjumaad API ah, tan iyo users ayaa la iska beddelka matoorada, kaas oo buux dhaafiyey Transposh adag ku suntan muhiimka ah API for Bing ka.
Halkaa marka ay marayso, waxaana uu lahaa version adag, taas oo u muuqday sida wax wanaagsan in ay sii daayaan, laakiin ma jirin, waxaan lahaa in ay leeyihiin qaar ka mid ah astaamaha kale ee, si aannu ugu dambeyntii go'aansaday si wax looga qabto arrinta ee taageerada widgets kala duwan (iyo xulashada title aad u, yippee!). Wuxuu u muuqdaa mid horay arrin si toos ah? laakiin ma jirin, taasi sabab u binaynaa sheeko weyn ee kaabayaasha widget our sidoo. Dhab ahaantii waxaa hagaajinta ilaa xad si wayn ula beddelo habka CSS daray, iyo habka widgets ku socodsiisay kiis oo is bedel ah oo ku qoran luuqad (hadda iska ilaali waxaan a call POST aan waxtar lahayn in ay server). Iyadoo qoraal inaan nasiib ku filan in lagu turunturoodaan PHP5.3 ah in ay arrintan sameeyey sharicga PHP5.2 leh go'an of dhibaatooyin kale kuwaas oo todobaadkii kale dib u qabtay naga sii daayo. Waxaan rabnaa inaan u mahad users badan oo soo saaray ilaa ay la sii daayo beta iyo caawisay naga heli dhibaatooyinka in ay ahaayeen qarsoonaa ka yar layers of code iyo dhibka ay.
Waxaan sidoo kale soo qaaday fursaddan si ay bedesho erayada wax yar, haddii aad displaying xayasiiska Google ka soo Most on pages laguu turjumo, waxaan u qaadan doonaa 1/1000 of space in loogu isticmaalo ula code Most gaar ah, sidaas darteed haddii Transposh waa gargaar aad ee dakhliga ah $ 10K aad waxaa la noo soo iibsan qaxwaha! Sidaas mahad! Si aad u caddeeyo waxyaabaha xoogaa, ma waxaan ku abuuraan bannaan oo dheeraad ah ad on your page, waxaana aan gelin doonaa xayasiiska kasta ama beddeli khariidad aad, haddii aad leedahay xayasiiska jirin, aan waxba la sameyn. Haddii aad u malaynayso in tani waxaa la fara badan weydiinaya, aad si fudud u tirtirto laga yaabaa in aannu plugin, foori habayn jilicsan, iyo noqon on your hab. Haddii aad rabto in aad liisan ganacsi, , ma aynu iyaga weli ku iibin, laakiin ay ku kacayso oo badan.
Isbeddellada kale ee version this waxaa ka mid ah:
Added Catalan iyo Hindi taageero for Bing – hadlaayo.
Widget Dropdown CSS hagaagay – Waxaa dhab badan ka fiican haatan u muuqdo.
Taageerada Memcached – haddii Beebee iyo khasnado kale opcode ahaayeen aad u badan kuu, hadda waxaad isticmaali kartaa memcached iyo leedahay badan oo madadaalo.
Better 404 page maaraysay (ma abuuri links ku cusub pages non-jira) – oo macnaheedu yahay dacallada google ka kaarku doonaa goobta ka yar.
Fix isagu qudhiisu ka on cloudsites rackspace – waxay lahaa x-kayd ah oo lagu rakibay for cache opcode, laakiin xusuusta la user jirin, kaas oo sababay si xowli ah ee logfiles – hadda go'an.
Ciidamada Kumandoska badan oo dheeraad ah oo yar yar – Waxaan ku tirinayaa laga yaabaa kuwa, laakiin aynaan haysan Faraha filan.
Waxaan rajaynaynaa inaad doontaa raaxaysan version this, iyo sida had iyo jeer, sugeyso your comments, fikrado, talooyin iyo holaca.
P.S – Imtixaanka on WordPress 3.3 beta4, shaqeeyaa weyn.
Filed Under: Shaaciyaan Release, Software Updates Tagged Iyadoo: Ajax, Bing (msn) turjumaan, bugfix, google turjumi, sii daayo, widget, xcache
Version 0.7.5 – Maalintaas waxa ugu dheer ++
June 22, 2011 by dalabyo 23 Comments
Taageerada 5 luqado badan oo jaaniiska
Mid ka mid ah maalin ka dib markii xagaagan ayaa si rasmi ah bilaabay in hijrootay waqooyi, waxaannu ku hanweynahay in ay soo bandhigaan version 0.7.5 oo ka mid ah plugin. Version Tani waxay taageero ah ee luqado cusub oo lagu dhawaaqay sida ay taageerto maanta by Google Translate – Bengali, Gujarati, Kannada, Tamil iyo Telugu.
Ka hor inta ku yaacaya dar luqado kuwa si aad blog, fadlan la xasuusiyaa in luqado kuwa ay isticmaalaan wakiil ah ajax si ay u si sax ah u shaqeeyaan, taas oo macnaheedu yahay in ay abuuraan load a on your server kulan ee ugu horeeyay ee ay la a string turjumaad cusub kor (waxaa qasbaya inay soo qabtee turjumaad ka soo Google). Sidaas dooqaaga adigaa, laakiin waxa aad la ogeysiiyaa…
More version this dheeraad ah ku daro ikhtiyaarka ma diidmada naqayna sida caadiga ah ay la Luqadda Transposh ee, dhaqanka this (cusub on 0.7.4) oggol yahay users MU in ay pages admin in ay luqadda, laakiin dhinaca kale ka xumaaday dadka isticmaala in ay doonayeen in ay maamulaan goobta luqad ka duwan ay default, sidaas hada tani waa configurable.
Waxaan sidoo kale soo hagaagtay UI turjumidda, ka buttons soo socda iyo previous hadda badbaadin isbedel lagu sameeyo, iyo wada hadal aan la dib-u-gadaamay doonaa gujinaya buttons kuwaas.
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: 0.7, google turjumi, yaryar, luqado badan oo, sii daayo, UI, plugin wordpress
Version 0.6.7 – Maxaa ku xiga?
December 18, 2010 by dalabyo 23 Comments
Maxaa ku xiga for Transposh?
Yesterday aanu sii daayay version 0.6.7. Version Tani waxaa ka mid ah Ciidamada Kumandoska yar yar dhowr, labadaba awood u leh inay u tarjumaan jumlado more marka google ma la ogaado afka isha si sax ah, iyo awood u leh inay ka mid links si toos ah files Kenia (kuwa keeni doonaa a 301 wuxuuba ku dhici).
Si kastaba ha ahaatee waxa ka muhiimsan waa in aanu ugu dambeyntii awoodin in ay SHUBAY dhacdooyinkaasi our, iyo dhigay gear dhaqaaq buuxda version weyn ee xigta Transposh – taas oo noqon doona 0.7. Ahmiyada version tani waxay noqon doontaa horumar wayn oo si interface frontend turjumaan ah, iyo waxaan looga baahan yahay ee this gelin online in our site horumarinta at http://trac.transposh.org/wiki/milestones/0.7. Qof kasta oo doonaya in ay saameyn ku version xiga waxa ay soo dhaweeyeen si xaalkaa iyo comment on page wiki in ama la abuuro tigidh noo. Waxaan dib u eegi doona codsi kasta oo isku day in aad ku haboon yahay jadwalka.
On qaar kale wararka, waxaan jeclaan lahaa in aan u mahad celiyo Colnect, naga kafaala cusub tabarucay a VPS cusub ee Transposh taas oo rajo ka dhigi doonaa goobta tag xoogaa ka dhaqso. Waxa kale oo aannu isku dayay in ay isticmaalaan cloudflare si loo hagaajiyo adeegga yaga, Si kastaba ha ahaatee waxaan haysta Natiijooyinka isku dhafan leh in, sidaas darteed haddii aad ku aragto dhibaato helitaanka this site, fadlan noo soo sheeg.
Last on ajandaha, version Alpha ee plugin for blogger noo ah waa on shuqulladii, haddii aad leedahay site a on blogger iyo rabto in aad ku darto turjumaad u, kaliya nala soo xiriir.
Filed Under: Shaaciyaan Release, Software Updates Tagged Iyadoo: 0.7, blogger, google turjumi, ugu waaweyn, yaryar, sii daayo, trac, plugin wordpress